Nagarik News - राजवल्लभको रोजाइमा मुस्ताङ, धम्पुस र कन्याम
होमपेज / कला / नेपाली फिल्म / राजवल्लभको रोजाइमा मुस्ताङ, धम्पुस र कन्याम
राजवल्लभको रोजाइमा मुस्ताङ, धम्पुस र कन्याम	14 Jul 2013 | 13:30pm आइतबार ३० असार, २०७०
नेपाली फिल्मका हिरो राजवल्लभ कोइराला के पढ्न मन पराउँछन् ? खानपान र घुम्ने स्थान बारे उनको रुचि के छ ? पढ्नुहोस् उनकै शब्दमा :
दाल, भात र तरकारी मेरो मनपर्ने खाना हो। हरेक नेपालीको प्रिय खानाबाट म कसरी टाढिन सक्थें र! सुटिङका क्रममा धेरै ठाउँ गइरहनुपर्छ। नेपालमै हुँदा दाल, भात, तरकारी र अचार सेट नै हो मैले खाने। अझ त्यसमा साग भयो भने झनै स्वादिलो हुन्छ। ठाउँले पनि खाना र त्यसको स्वादमा असर गर्दो रहेछ। जे खाए पनि स्वस्थ र सफा खाना खाऔं भन्ने मेरो विचार छ। विदेशी आइटममा मलाई इटालियन खाना मनपर्छ। पास्ता खान खुब रुचाउँछु। नेपाली परिकारसँग स्वाद मिल्ने भएर होला इन्डियन खानाका परिकारले पनि मलाई लोभ्याउँछन्। मसालेदार इन्डियन आइटम पनि मलाई खुब रुच्छन्। समयअनुसार कन्टिनेन्टल खाना मनपर्छ। फास्टफुडमा मलाई मःमः औधी मिठो लाग्छ। कुनै पनि खानेकुरा सफा र स्वस्थ्यकर छ भने खाइहाल्छु। फलफूलमा आँप देख्नेबित्तिकै जिब्रो रसाएर आइहाल्छ। स्याउ, केरा र अंगुर पनि मलाई मनपर्ने फलफूल हुन्। फलफूललाई दहीमा राखेर लस्सी बनाएर खाँदा मिठो लाग्छ।
कलाकर्मी भएकाले सुटिङका लागि विभिन्न ठाउँ जाँदा स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ, त्यसका लागि खाना कस्तो छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। कहिलेकाहीँ खाना र खाजाको तालिका नै मिलाउन सकिन्न।
कामको सिलसिलामा धेरै ठाउँमा घुम्न पाइन्छ। घुमेका ठाउँमध्ये पोखरा मलाई मनपर्ने ठाउँ हो। त्यहाँको फेवातालको सुन्दर दृश्यले मलाई सधैं पुलकित बनाउँछ। पोखराबाट मनोरम ताल, हिमाल र पहाडी हिमशृंखला देख्न सकिन्छ। त्यहाँको वातावरण खुला र शान्त पनि छ। मलाई एकान्त ठाउँ मनपर्नै हुनाले सधैं पोखरा जाने हुटहुटी चलिरहन्छ।कुनै ठाउँको भ्रमणमा जाँदा साथीहरू भए अझ रमाइलो। आफ्नो मुडअनुसार पनि कुन ठाउँ मनपर्ने-मन नपर्ने भन्ने हुँदो रहेछ। मुड ठिक छ र साथीहरू छन् भने नजिकको कुनै डाँडामा पुग्दा पनि रमाइलो नै हुन्छ। विशेषगरी प्राकृतिक दृश्यले भरिपूर्ण शान्त ठाउँ मेरो रोजाइका ठाउँ हुन्।हरेक स्थानका आ–आफ्नै विशेषता हुन्छन्। मुस्ताङ, इलामको कन्याम र कास्कीको धम्पुस मलाई मन परेका ठाउँ हुन्। यी फरक ठाउँका फरक आकर्षण छन्। त्यहाँका सुन्दरताले मन बहलाउन सहयोग गर्छन्। विदेशमा अस्ट्रेलियाको सिड्नी सुन्दर सहर लाग्यो। त्यहाँका बिच र कोस्टल एरियाले मलाई लोभ्याएको छ। अमेरिकामा ओसन सिटी र क्यालिफोर्नियाको फ्यान्टम पनि मलाई मनपर्ने ठाउँ हुन्। अमेरिकाको न्युयोर्क पनि मलाई मन परेको अर्को ठाउँ हो। विदेशतिर घुमफिर गर्दा समुद्री क्षेत्र र मानिसका गतिविधिले मेरो ध्यान तान्ने गरेका छन्।
साहित्यप्रति मेरो विशेष रुचि छ। म कविता पनि लेख्ने गर्छु। यो वर्ष त्यति पुस्तक पढ्ने मौका पाएको छैन। दार्शनिक र आध्यात्मिक पुस्तक पढ्न रुचाउँछु। काममा व्यस्त भएकाले आजभोलि त्यति मजाले पढ्न पाएको छैन। यो वर्ष मैले धेरै ठाउँ घुमें, त्यसले पनि पढाइमा समय पुग्न सकेन। समय मिलेसम्म पुस्तकमै घोत्लिने बानी छ। झमक घिमिरेको 'जीवन काँडा कि फूल', जगदिश घिमिरेको 'अन्तर्मनको यात्रा' र बुद्धिसागरको 'कर्नाली ब्लुज' मैले पछिल्लो समय पढेका नेपाली पुस्तक हुन्।मलाई आत्मवृतान्तले पनि मन छुन्छन्। कुनै पनि पुस्तक पढ्नु नयाँ कुरासँग घुलमिल हुनु र केही न केही ज्ञान हासिल गर्नु हो जस्तो लाग्छ। अध्ययनपछि कुनै विषयप्रतिको दृष्टिकोण र विचारमा प्रभाव पर्छ। दार्शनिक र अर्थपूर्ण कल्पनाका पुस्तक मेरो पहिलो रोजाइमा पर्छन्। 'जीवन काँडा कि फूल' मलाई औधी मन परेको पुस्तक हो। यो पुस्तकले आत्मबल र प्रेरणा दिन्छ। यो प्रेरक पुस्तक हो। पुरानाभन्दा पनि समकालीन नेपाली पुस्तक अध्ययन गर्न मन लाग्छ। समकालीन पुस्तकबाट अपडेट भइरहन सजिलो पर्दो रहेछ। पछिल्लो समय हरिवंश आचार्यको 'चिना हराएको मान्छे' पढ्न मन लागिरहेको छ।पाउलो कोएलो, खालिद हुसेन, मर्खेज र फ्रेडिक नित्से मलाई मनपर्ने विदेशी लेखक हुन्। हिजोआज चेतन भगत र हारुकी मुराकामीका पुस्तकहरू पढ्दै छु।प्रस्तुति : क्रान्ति पाण्डे « नेपाली फिल्ममा भाइचुङ
राजेशले ढाँटे »